Ala ịkpa Atacama pụtara kpamkpam na oge ntoju | Netwọk Mgbasa Ozi
N'oge oyi gara aga, oke mmiri ozuzo na atụghị anya na-edebanye aha na mpaghara ugwu nke Chile. Nke a emeela ka ọtụtụ puku ihe ọkụkụ too nke ọma na mbara ọzara mmiri na-acha na ụwa, dịka Ọzara Atacama.
Nke a bụ ihe ịtụnanya nwere ihe dịka afọ ise ruo afọ asaa, mana nke ahụ na-agaghari na-adighari n'ihi na onu ogugu nke El Niño. Kedụ ka ụdị ụdị dị iche iche nwere ike isi wee too na anụmanụ dị n'ọzara?
1 Ihe puru iche
2 Njem Nleta Atacama
Ihe omume a na-adọta ọtụtụ puku ndị njem nleta. Ma ọ bụ na ịhụ ọzara nke nwere ala zuru oke abụghị ihe nkịtị. Fọdụ ndị ọkachamara na-arụtụ aka na n’afọ a 2017 enwere ike inwe ekele maka ifuru kachasị mma n'afọ iri gara aga nyere na oke mmiri ozuzo na ugwu nyere ka eto nke ahịhịa na ahịhịa mara mma.
Maka okooko nke ọkwa a ga-eme, ọ bụghị naanị mmiri ozuzo, kamakwa jiri nwayọ mụbaa okpomọkụ n'oge opupu ihe ubi ka ọ ghara imebi uto na mmepe nke osisi.
Njem Nleta Atacama
Mmiri ozuzo edere na ọnwa nke ọnwa Mee na mpaghara Atacama bụ ihe butere pụta nke kapeeti a nwere ọtụtụ agba. O doro anya na ọzara okooko osisi bụ otu n'ime akwụkwọ ozi ndị kasị nwee ekele maka ndị njem nleta na-abịa na oke ugwu ugwu na ọnwa ndị a, ihe na-adọrọ mmasị nke a na-aghọtabeghị na sayensị enwebeghị ike ịkọwapụta.
Nke a na-akpọ ndị obodo «ọzara ọzara»Ndị ahịa na ndị njem nleta na-ejikwa ya iji kwalite omenala na njirimara ndị ọzọ nke mpaghara ahụ. N'etiti ebe ha nwere ike inye bụ ogige ntụrụndụ mba, oké osimiri kristal, ebe nchekwa sitere n'okike na ọdịdị ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ọzara Atacama yiri okooko osisi
Ndị Africa orichteropes na-ata ahụhụ site na mgbanwe ihu igwe